Lanonan’ny Alatsinain’ny Paska | NewsMada
Lanonan’ny Alatsinain’ny Paska
Fety roa sosona no iarahana amin’i Jerry Marcoss, etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe. Homarihina amin’io hetsika lehibe io ny faha-15 taona niakarany an-tsehatra. Marobe ireo mpanakanto fanta-daza hanotrona azy amin’izany, hiara-hihira ary hanafana ny tontolo andro. Anisan’ireny ry Nina’s, Jazz MMC, Gangstabab, Simonda Valeur, Solangizia, sns.
Mampanantena « Lundi de Pâques goavambe » ny MadaPro sy ny BM Production ho an’ireo hisafidy ny ho eny amin’ny Kianja Annexe Maki, eny Andohatapenaka. Hanatanterahana ny fampanantenana, nanasa mpanakanto goavana sy maromaro izy ireo. Lohalaharana amin’izany i Barinjaka. Hotronin-dry Black Nadia, Taa Tense, Jean Aimé ary i Elodie.
Nosantarina omaly, hariva tamin’ny « Zoma manifika », ny fiarahana amin’ny tarika Rossy ato anatin’ity fetin’ny Paska ity. Matevina ny fandaharam-potoana, etsy amin’ny Kianjan’ny kanto Mahamasina. Hibahan-toerana kosa ny fampisehoan’ny tarika Rossy, ny Alatsinain’ny Paska. Tsy handeha irery ny tarika fa hotronin’ny mpanakanto samihafa.
Ho « Paska milay be » ny eny Antaninkatsaka Itaosy, afakampitso. Samy hahazo ny anjara ny rehetra amin’ny mozika maroloko efa nomanina. Araka izany, tsy ho vitsy koa ny artista ho tonga eny an-toerana. Tsy iza izany fa ry Black Nadia, Khaleba, Elodie, THT, Marion ary ny tarika Mage4. Hampiavaka ny hetsika ny fanentanan-dry Bi Jocker.
Ho an’ireo tsy te hiala ny eto afovoan-tanàna, mbola anisan’ireo azo hisafidianana koa ny fampisehoana etsy amin’ny Kianja ANS Ampefiloha, mandritra ny tontolo andron’ny Alatsinain’ny Paska. Tsy ho ankiato ny fiarahana mandihy amin’ireo mpanakanto hiaka-tsehatra eny, izay samy mpanafana fety avokoa. Hifandimby eny ry Black Nadia, Nina’s, Willy, Tempo Gaigy, Tif a Tif, Tams, sns.
Haharitra roa andro tsy an-kijanona kosa ny fety eny amin’ny Batou Beach Ambohimanambola, rahampitso sy ny Alatsinain’ny Paska. Tonga amin’ny andiany fahefatra ny « D Full party », fety ho an’ny fianakaviana iray manontolo. Araka izany, ho maro karazana ny lalao sy kilalao ary ny fialam-boly. Toy ny isan-taona, tsy ho latsa-danja ny fampisehoana hoentin’ny mpanakanto toa an-dry Meyzah, Gangstabab, sns.